FAMONOANA ZAZA TETSY AMBOHITRARAHABA : Zaza tsy ampy taona roa no saron’ny zandary
Ny talata alina ihany dia efa tra-tehaky ny zandary ireto ankizy tsy ampy taona namono nahafaty zazalahy kely vao 12 taona tamin’ny fomba feno habibiana tetsy Ambohitrarahaba. 12 octobre 2017
Nandritra ny fanadihadiana natao an’i Hiancy no nahafantarana fa i Kezia sy Tine no nanao ny fanafihana sady naka an-keriny azy. Taorian’izany dia nandray fepetra avy hatrany ny mpitandro filaminana tamin’ny fanaparitaham-baovao teny amin’ny Fokontany sy ny manodidina rehetra.
Fotoana vitsy taty aoriana dia nisy niantso ny zandary teny Anosiala, nilaza fa mahita azy dahy ireo. Vao naharay izany izy ireo dia nandrasana teny amin’ny lalana fodian’ireto zaza tsy ampy taona nahavanon-doza mahatsiravina ireto. Noraisim-potsiny i Kezia sy Tine ary mbola tra-tehaka teny amin’izy dahy ny vola mitentina 14 tapitrisa Ariary izay nanjavona tao amin’ilay trano notafihany.
“Intelo nifindra taksibe izahay hamonjy ilay mpanampy satria Anosiala no ipetrahan’io naniraka io. Najanonay teo i Hiancy fa ny vola nentinay avokoa fa ny mason’i Hensie no navelanay tao anaty harona. Tsy hitanay intsony io tompon’antoka io ka voatery nody izahay. Niverenanay nojerena i Hiancy, kinanjo efa tsy hita teo”, hoy i Kezia sy Tine nandritra ny famotorana natao azy ireo. Voalaza fa 15 taona sy 13 taona ireo nahavanon-doza.
Mbola eo am-panaovana famotorana lalina azy mianadahy ireo ny mpitandro filaminana. Nanamafy izy mianadahy ireo nandritra ny famotorana fa ilay mpanampy no naniraka azy hanao ny famonoana. Mbola eo am-pikarohana ity tovovavy ity ankehitriny ny mpitandro filaminana. Voalaza ihany koa fa ankizy mpilalao miaraka izy efatra ireo ary mifanakaiky ny trano misy azy ireo. Fantatra ihany koa fa nisy fifamaliana tamin’ilay mpanampy sy ny ray aman-drenin’ireo zaza niharam-boina ka tsy maintsy noroahina ary eo am-pitadiavana ny solony ity fianakaviana ity ankehitriny. Vola vidina fiara namidy io nanirahan’ny mpanampy ireo zaza hanao fihetsika mamoafady toy izao.
Raha tsiahivina dia nisy namono tao amin’ny tranon-dray aman-dreniny ny zazalahy kely iray vao 12 taona monja ny talata teo. Ny ra mandriaka no hitan’ilay reniny vao niditra ny trano tamin’izany. Tapaka tanteraka ary nipotsika niala ny masony roa nanaovan’ireo nahavanon-doza ity farany. Mbola tazana tao an-toerana ihany koa ny antsy namonoan’izy ireo an’io zazalahy kely io. Tsy nisy tao ireo ray aman-dreniny ka izy dahy irery ihany no tao an-trano tamin’io fotoana nitrangan’ny loza io. Noentin’ireo ankizy roa tsy ampy taona an-keriny ilay vavy vao 6 taona rehefa azon’izy mianadahy nahavanon-doza ny vola sy ny firavaka volamena tao amin’io tokantrano io. Miandry ny fampiakarana ny raharaha amin’ny Fitsarana ankehitriny ary ho hita eto ihany ny tohiny.